ကြားရပြန်တဲ့ စိတ်မကောင်းစရာသတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကြားရပြန်တဲ့ စိတ်မကောင်းစရာသတင်း
Posted by shwe pont on May 30, 2012 in Copy/Paste | 26 comments
မန်းလေးဂေဇက်နဲ ့အကြာကြီးဝေးနေပြီးမှ စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းနဲ ့ပြန်လည်ရောက်လာပြန်ပါပြီ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ရမ်းဗြဲမြို့အနီးရှိ ကျောက်နီမော် ဆိုတဲ့ မြို ့မကျ တောမကျ အရပ်မှာ ရခိုင်တဝက်၊ မူစလင်တဝက်ခန် ့မျှနေထိုင်ကြပါတယ်။အခုကြားရတဲ့ သတင်းတပုဒ်က ရခိုင်မလေး တယောက်ကို ကုလား ၃ ယောက်က ဝိုင်းပြီးအဓမ္မကျင့်ပြီး သတ်ပစ်လိုက်လို ့တဲ့၊ စိတ်မကောင်းတဲ့အပြင် ဒေါသလည်း တော်တော်ထွက်မိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်နီမော် ဆိုတဲ့ဒေသရှိ ကုလားတွေဟာ သံတွဲရှိ ကုလားသူဌေးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီး၊ တခုခု အရေးကိတ်စပေါ်တိုင်း သူတို ့ကုလားဌာနချုပ်က ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုကြောင့် လူပါးဝနေတာကြာပါပြီ။ အရင်တုန်းကလည်း (ကျွန်မတို ့မမွေးခင်အချိန်ကတည်းက) ကျွန်မအမေ ပြောပြလို့သိရတဲ့အကြောင်းတခုလည်း ရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံငွေတိုး ချေးစားတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသမီးကို သူတို ့ကိုငွေတွေချေးထားပြီး၊ သူတို ့နဲ ့လည်း ဝင်ထွက်စားသောက် ခင်မင်နေတဲ့သူကို ငွေတွေမဆပ်ချင်တော့ လူကို အပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်ပြီး ဂုန်နီအိတ်နဲ့ ထုတ်ပြီး ပစ်ထားခဲ့လို့အိမ်ကလူတွေကလည်း ပျောက်ပြီးရှာတော့မှ ပုပ်နံ ့ထွက်နေတဲ့ အိတ်ကို တွေ ့တဲ့အချိန်မှာ လက်သည်မပေါ်ဘဲ အမှုမှန်လည်းမပေါ်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ အတိအကျလည်း အရေးယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးတဲ့။ ရခိုင်ဒေသမှာ ကုလားတွေ ရက်စက် လူမဆန်မှုကို အထက်ကို ငွေနဲ ့လိုက်ပြီး အမှုကို ဖုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေဟာ တစ်ခု နှစ်ခုတင်မကပါဘူး။ အခုလည်း လာပြန်ပြီ။ ကျောက်နီမော်ရဲစခန်းကတော့ လူတွေ ဖျက်ဆီးလိုက်လို့ပျက်စီးသွားပြီလို့သိရပါတယ်။ အခုတော့ ကျောက်နီမော်က ရခိုင်တွေရော အဲဒီအနီးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေပါ ရမ်းဗြဲမြို့ရဲစခန်းကို လူပေါင်း ရာချီ ပြီးတက်လာကြတယ်လို ့သိရပါတယ်။ ချီတက်လာသူတွေကို စခန်းမှာ မရပ်ခိုင်းဘဲ မဝတ ရုံးကို ခေါ်သွားပြီး ၊ အထဲမှာ ပြောဆိုနေကြတယ်လို ့သိရပါတယ်။ ရမ်းဗြဲကလူတွေလည်း အံ့ဩပြီး ဒေါသထွက်နေကြတယ်လို့သတင်းရပါတယ်။သတင်းအတိအကျ ကိုတော့ ထပ်မံသိရတဲ့အခါ ထပ်တင်ပေးပါမယ်၊ ကောင်မလေးအသက် ၂၇ နှစ်၊ လို ့သိရပါတယ်။
ဒီလို ကိစ္စတွေကို အာဏာပိုင်တွေထိရောက်စွာ အရေးယူဘို့လိုနေပြီ နောက်ဆုံးလူမျိုးရေးအထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ် သတင်းတင်ပေးတဲ့ သူကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ဆက်တွဲ ကိုလဲ ဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်
အင်း လူမျိုးရေးတွေပါကုန်ရင်တော့မလွယ်ဘူးပဲ။ ဒီဖြစ်ရပ်က သာမာန် Rape လုပ်တာလောက်မရိုးရှင်းဘူး။ ကုလားနဲ့နွယ်ကုန်ရင်အမှု့က ကြီးသွားရော။ အဲဒီ ကုလားဆိုတဲ့လူမျိုးကလဲ သူတို့ပြောရင်သူတို့ကို လူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်လို့ အမြဲပြောတယ်။ သူတို့ကို နိုင်ငံတကာက သနားလာအောင် ကုလားချွဲချွဲပြီး အမြဲပြောတယ်။ ပြီးတော့ မဟုတ်တာ လုပ်လိုက်ရင်လဲ သူတို့ချည်းပဲ။
ဒီသတင်းဟာမဟုတ်သေးပါဘူး ၊ဘယ်နေရာမှာမဆို ဘာသားခြားတွေအချင်းချင်းချစ်ကြိုက်
ဥပမာ မောင်မောင်ကရခိုင်လူမျိုး မမက ကရင်လူမျိုး သူတို့အချင်းချင်းချစ်ကြိုက်ကြပြီးလက်
လွန်ကုန်တော့ သူ အဖေက ဒီကောင်ရခိုင်ကရင်ကိုစော်ကားတယ်ဆိုပြီးသူဘက်ကလူပါအောင်
မဟုတ် အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူကပုံကြီးချဲ့ပြီးလူမျိုးရေးမုန်တီးမူတွေလုပ် ဒါမျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့
မတတ်ပါနဲ့၊ဘယ်စစ်တပ်ဝင် . . . . ဘယ်သူဘာလုပ်တယ် ..ဒါကိုတပ်မကောင်းမပြော
တရုတ်မတွေ ကိုဗမာကမဒိန်းကျင့်လို့၊တရုတ်ကမဒိန်းကျင့်လို့နဲ့ ၊လူမျိုးရေတွဲခေါ်ပြီး
ရိုမမှာ အလံနီတွေ လည်ပင်းလှီးကြတာဘယ်သူတွေလဲ . .သမိုင်းပြန်ကြည့်ပါ . .
မုဒိန်းမှု့ အပြင် အလွန်ရက်စက်တဲ့ လူသားမဆန်တဲ့ လူသတ်မှု့ တစ်ခုပါဗျာ။
အာဒီ မျိုးမစစ်ရိုဟင်ဂျာ အေလိုးတွေ အကုန်မျိုးဖြုတ်ပစ်ရမယ်။လူယုတ်မာတွေ။ရခိုင်တစ်ပြည်လုံးကုန်တော့
ကိုကျတော့ ဘာလို့ လွှတ်ပေးနေကျလည်း။ရှိူင်းဆောက်လုပ်ရေးက ကောင်လည်းရိုဟင်ဂျာဘဲ။သူ့အမျိုး
ရိုဟင်ဂျာကိုနိုင်ငံထဲဝင်ဘို့တစ်ယောက် သိန်း ၂၀ဝ အကုန်ခံပြီး မြန်မာပြည်ထဲကုလားတွေသွင်းနေတယ်။
အဲ့ကိုယ်မေကိုယ်ချစ် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဟို ဘုန်းကြီးတပ်တဲ့ စစ်တပ်နဲ ့လွှတ်ပေးရမှာဗျ ။ ဒါမှ ဗမာ ဆိုတာ ဘယ်လို ထဲ့သလဲ ကောင်းကောင်းသိသွားမှာ ။ နို ့ငွေများငွေနိုင် နဲ ့ကြမ်းချင်တိုင်း ကြမ်းနေဦးမှာ ။
ဒီသတင်း ဟုတ်၏၊မဟုတ်၏ မေးမြန်းနိုင်စေရန် ရမ်းဗြဲရဲစခန်း၊ကျောက်နီမော်ရဲစခန်း
ဖုန်းနံပါတ်များ စုံစမ်းပေးပါမယ်။သတင်းမတိကျရင်. ပြောစရာဖြစ်နေတော့မှာဘဲ။ဒါနဲ ့ဗျာ
သံတွဲက ဘာဘာညာညာဂိုဏ်းချုပ်ပြောတာတော့ နည်းနည်းလွန်မယ်ထင်ပါတယ်။
တိကျရင် ကောင်းပါတယ်၊ရမ်းဖြီးရင် ဘယ်သူ ့ပြောပြော မကောင်းဘူးထင်လို ့ပါ။
ဒီသတင်းကို အတိအကျ ဘယ်သူဘယ်ဝါ လို ့ပြောပြီး မရေးနိုင်တာ ကျွန်မသတင်းရယူချက်အားနည်းလို့လို ့ပဲခံယူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီသတင်းက လူမျိုးရေးအမုန်းပွားရေး လုပ်ကြံရမ်းဖြီးတယ်လို ့ပြောတဲ့အတွက် ထပ်ဆင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။
အပေါ်မှာ thu thu ဆိုတဲ့ သူရဲ ့.. မောင်ရွှေမကောင်းမောင်ရွှေ့သတ်ပစ်လိုက်အရေးယူလိုက်ပေါ၊
ဒါလေးနဲ့ပုံကြီးချဲ့ပြီးဗလီဖျက်၊အိမ်တွေမီးရှိုမလုပ်ကြပါနဲ့။.. ဆိုတော့ သူများသားပျိုသမီးပျိုကို ယောက်ျား သားသုံးယောက်(ဘယ်ဘာသာဝင်ဆိုတာထား) က အတင်းအဓမ္မဖျက်ဆီးတဲ့အပြင် လူကိုပါသတ်ပြီး (သတ် တာတောင်မှ ရက်ရက်စက်စက် ပြီးတော့ လက်ဝတ်လက်စားကိုလည်း နားဖြတ် လက်ဖြတ် လုပ်ပြီးယူသွား တာကို) ဒါလေး ကိုပုံကြီးချဲ ့တယ်လို ့ပြောတာတော့ ပြောသူမှာ သားသမီး၊ နှမ အမေတွေရှိရင် ကိုယ်ချင်းစာ ပါလို ့ပဲပြောချင်တယ် ၊
ခုလက်ရှိမှာ တရားခံ ၃ ယောက်ကို ရမ်းဗြဲကနေ ကျောက်ဖြူ အကျဉ်းထောင်သို ့မနေ ့ညကပဲလွှဲပြောင်း ပို ့လိုက်ပြီလို ့သတင်းရပါတယ်။ ဒီအမှုမဖြစ်ခင်ကလည်း အဲလို လူသတ်မှုမှာ တရားခံကို လူစားထိုးပြီး ၊ ငွေ နဲ ့လိုက်မှုကြောင့် တရားခံစစ် လွတ်ဖူးတဲ့ ရာဇဝင်ရှိထားလို့ခုတခေါက်အမှုမှာ ဒီလိုလုပ်ခံရမှာစိုး လို့ကျောက်နီမော် ချောင်းဝနယ်သူ နယ်သားများက ဘယ်သို ့ဘယ်ပုံ တရားခံကိုထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးဖို ့အတွက် ရမ်းဗြဲမြို ့နယ်အထိ လာရောက် တောင်းဆိုကြခြင်းဖြစ်တယ်လို ့သိရပါတယ်။ ဒီအမှုအတွက် ဗိုလ်မှူးကျော်ခင် ကိုယ်တိုင် ရမ်းဗြဲအထိလိုက်လာတယ် လို ့လည်း သိရပါတယ်။
နောက်ထပ်သိရတာက အသတ်ခံရတဲ့ကောင်မလေးက မောင်နှစ်မလေးဦးရှိပြီး၊ အစ်ကို နှစ်ယောက်က မလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်နေတာလို ့လည်း သိရပါတယ်။ ခုတော့ ညီမလေး ကိစ္စပေါ်တော့ လိုက်လာနေ ကြပြီလို ့သိရပါတယ်။ အစ်မတယောက်ရှိတာ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ ဆုံးသွားလို ့မိခင်ဖြစ်သူက ရန်ကုန် မှာ အပ်ချုပ်သင်နေတဲ့ သမီးကိုလှမ်းမှာလို ့၊ ချောင်းဝရွာကို ဒီနှစ် သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကမှ ပြန်ရောက်တာလို ့သိရပါတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းကလေးက အသားဖြူဖြူနဲ့လုံးကြီး ပေါက်လှပါတဲ့။
မုဒိမ်းကျင့်သူ(၃) ဦးမှာ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျောက်ထရံ ကုလားရွာမှ ထက်ထက် (၂၃)နှစ်၊ ရော်ဖိ (၁၈) နှစ်နှင့် လူယု (၂၁)နှစ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ သုံးဦးစလုံးမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။
ရခိုင်ပြည် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် သပြေချောင် ကျေးရွာမှရခိုင်ပြည် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် သပြေချောင် ကျေးရွာမှ အသက် ၂၆ နှစ် အရွယ်သာ ရှိသေးသော မသီတာထွေးကို မေလ ၂၈ ရက်နေ့က မုဒိမ်းကျင့်ပြီးနောက် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ် လိုက်ရသည်။
ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဖူး သိရတော့မှာပါ… facebook မှာ တက်လာတဲ့သတင်းကို
ဖတ်ကြည့်လို့ရအောင် လင့်ပေးလိုက်ပါတယ် …။
မမရွှေပုံရေ. ဒီသတင်းအမှန်ပါဘဲဗျာ။အခင်းကျူးလွန်သူတွေဟာ အင်မတန်ရိုင်းစိုင်းတဲ့
ကျောက်နီမော်ရွာနားက ကျောက်ထရံဆိုတဲ့ရွာကပါ။အင်မတန်ကို ရိုင်းစိုင်းသူတွေဖြစ်
တာကတကြောင်းမို ့လက်ရှိအခြေအနေကို စစ်တပ်မှ ယာယီထိန်းသိမ်းထားကြပါတယ်
လို ့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒါပေမယ့် မမရွှေပုံရေ သံတွဲဖက်က လူတွေနဲ ့မည်သို ့မျှသက်ဆိုင်
အမှန်တကယ်ကို ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် ဘာသာရေးအရဆိုလျှင်တောင် သေဒဏ်ဘဲ
ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို ့သံတွဲမြိုု ့က ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ ့များက ဆိုပါတယ်။ခုလဲ
ဥပဒေအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာ မို ့ကြီးတဲ့အမှု ငယ်ပါစေတော့ဗျား။
comment ကိုလိုင်းမကောင်းချိန်မှာ မမြင်ရလို ့ထပ်တင်ဖြစ်ရာက ၂ ခါထပ်သွားပါသည်။ ပြန်၍လဲ မဖျက် တတ်ပါသဖြင့်အခွင့်အာဏာရှိသူများ နောက်ထပ် comment ကို ဖျက်ပေးကြပါလို ့အကူအညီတောင်းပါတယ်။
Aye Gyi says:
မုဒိန်းမှု့လို့ခေါ်မလား အဓမ္မကျင့်မှု့လို့ခေါ်မလား ဟိုးဒင်းမှု့လို့ခေါ်မလား
အဲ့သည်ကိစ္စကတော့ ကျုပ်ကြားဘူးသလောက် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာအမြင့်ဆုံးလို့ပြောဒါဘဲ
ကျုပ်တို့နိုင်ငံက ထိပ်ဆုံးထဲမှာမပါသေးပါဘူး ( မှတ်တမ်းတွေ သူတေသနတွေမရှိတာလည်းပါသပေါ့ )
ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံတွေတောင် ဒီအမှု့တွေဖြစ်လာရင် လူမျိုးဘာသာတွေကို ရှေ့တန်းမတင်ကြဘဲ
ပြုသူကိုသာ ဖြေရှင်းကြတယ်လို့ထင်ပါတယ် ( အထင် )
ဒီတော့ကာ အမှု့ဖြစ်လာရင် သဘောအရ လူအမည် ဒေသ ဘာသာ တွေပါကြတာပါဘဲ
ကျုပ်အထင်တော့ ဘယ်ဘုရားကမှ ဒီလိုလိုက်စောက်လုပ်ဘို့ ပြောထားဟန်မတူပါဘူး
လုပ်တဲ့ကောင်က ဘာကောင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ သူ့ဖါသာ စည်းကမ်းဖေါက်တာကို
ဒါ့ကြောင့် ဒီကိစ္စကို အမှု့ကြီးအောင်
မလိုတာတွေမပြောဘဲ သူလိုငါလို ကမ္ဘာကြီးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ -ီုးမှု့လို့ဘဲသဘောထားလိုက်ကြပါဗျာ
ခင်ဗျားတို့ဟာက တစ်ခါလာလည်းဒါဘဲ နှစ်ခါလာလည်းဒါဘဲ လာခြင်တဲ့အချိန်လာ ဒါဘဲ
x x x x x သတောင်းစားတွေ …
လူစိတ်မရှိတဲ့ ကောင်တွေ ..
အဲ့ကောင်တွေ ဝဋ်ပြန်လည်ပါစေကွာ ….
ကျွန်တော့အနေနဲ့လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး တွေ အစွဲထားပြီးမပြောလိုပါဘူး။
ဒီကမ္ဘာကြီး အေးချမ်းစေချင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ်။အားလုံးမေတ္တာတရားရှိကြဖို ့အဓိကပါ။
တစ်ဦးနဲ ့တစ်ဦး တိုက်ခိုက်ကြတာ တစ်ကယ့်စိတ်မကောင်းစရာပါ။
ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင် ဖြေရှင်းပေးရတဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်းဟာ
ကိုယ်ကျိုးရှာ အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်းကြောင့်ပြဿနာပိုကြီးလာတာတွေ အမျုားကြီးတွေ ့ဘူးပါတယ်။
နှစ်ဘက်ခွစားတဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာ အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်း၊
ငိုစား ရယ်စား ရန်ပွဲစားတွေ၊ အမှုပွဲစားတွေ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိပါတယ်။
“အထက်ကို ငွေနဲ ့လိုက်ပြီး အမှုကို ဖုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေ”ဆိုတာ လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ စိတ်မကောင်းစရာတွေထက် ပိုပြီး စိတ်မကောင်းစရာရတဲ့ စိတ်မကောင်းစရာတွေပါ။
ကိုယ်ကျိုးရှာ နှစ်ဘက်ခွစားတဲ ့အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်းကို စီမံချက်ချဖယ်ရှားပြီး
ကျနော်လဲ the best နဲ ့ထပ်တူ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ။အလိုလိုနေရင်းထိုင်ရင်း ခေါင်းစဉ်တပ်တာတွေ
မကောင်းပါဘူးဗျာ။ငြိမ်းချမ်းစွာ ထာဝရ အတူ လက်တွဲနေထိုင်နိုင်ဖို ့သာအရေးကြီးပါတယ်ဗျာ။
” တရားခံ ၃ဦးသည် ၎င်းတို့ ကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှု ကို
MP4 ဖြင့် မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားပြီး ”
အဘ On Line ပေါ်မှာ ဆဲလေ့ ဆဲထ မရှိပါဘူး ၊
ဆဲတာကိုလည်း ထောက်ခံလေ့ မရှိပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ဒီခွေးတွေကတော့ ၊
ပြစ်ပြစ် နှစ်နှစ် ဆဲရေးခြင်းနှင့် ၊
ထိုက်တန်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
မုဒိန်းကျင့် ၊ လူသတ် တာကို ဗီဒီယို ရိုက်ထားတယ်တဲ့ ။
” မုဒိမ်းကျင့် အသတ်ခံရသည့် အမျိုးသမီး ၏ နောက်ဆုံး ခရီးမှာ
ရမ်းဗြဲ မြို ့လုံး ကျွတ် ပို ့ဆောင် ”
လူမျိုးခြားသုံးဦး၏ မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသော
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့၊ ကျောက်နီမော်မှ အသက် ၁ရ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်၏ ဈာပနကို
ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ကျောက်နီမော်သုဿန်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ
ဒေသတိုက်နယ်တဝှန်းရှိ ဒေသခံအင်အား ၅၀၀ဝ ကျော် ပို့ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြသည့် လူထုတွင် အပျို၊ လူပျို လူငယ်များက အများစုဖြစ်သည် ။
လွမ်းသူပန်းခွေတွင်လည်း တရားခံ ၃ ဦးအား ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများရှေ.တွင်
တရားခံ ၃ဦးသည်၎င်းတို.ကျူးလွန်ခဲ.သော.ပြစ်မှူ.ကို MP4 ဖြင်.မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းထားပြီး
ထိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောMP4 ကို ရဲများကလက်ဝယ်ထိမ်းသိမ်းထားသည်ဟုလည်းသိရှိရပါသည် ။
ည ရးဝဝ နာရီခန်.တွင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးမှ တိုက်နယ်တစ်ခုလုံးမှ ရပ်မိရပ်ဖများနဲ.
ဆဲသင့်တယ်အဘရေ … ကျွန်တော်ပါ လာဆဲပြီ
ရခိုင်တွေ တောင်းဆိုတဲ့ လူထုရှေ့မှာ ကွပ်မျက်ပေးရေးဆိုတာ မလွန်ဘူးလို့ပဲ ယူဆတယ်
မိုက်ရိုင်း ယုတ်မာ ပက်စက် လူမဆန် လွန်းအားကြီးတယ် …။
လူကို လူလို မမြင်တာ …။
မုဒိန်းမှုလောက်ဆို မပြောဘူးဗျာ .. လူပဲ …
မုဒိန်း လူသတ် … ဒီလောက်ဆိုလဲ မပြောသေးဘူး …
ကိုယ့်အပြစ်ပေါ်မှာစိုးလို့ လည်ပင်းညစ်သတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် လုပ်မိလုပ်ရာလုပ်တယ်လို့ ပြောလို့ရသေးတယ် …
ခုဟာက 16 နှစ်သမီးကိုဗျာ (ပိုစ့်ထဲမှာ ရေးထားတာ မှားနေတယ်ဗျ တကယ်တော့ ကလေးမက အသက် ၁၆ နှစ် ရှိသေးတာ) ရက်ရက်စက်စက် ကြက်ကလေး ငှက်ကလေးလိုဗျာ
လယ်ပင်း ကို ဟက်တက်ကွဲအောင် ဒါးနဲ့လှီးတယ် .။နားရွက်ဖြတ်တယ် ..။ ဒါးနဲ့ထိုးတယ် ..။
နောက်ဆုံးဗျာ နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ မတော်ရာကိုပါ ဒါးနဲ့ မွှန်းတယ် ..။
ကိုယ်ချင်းစာကြည့် … ခလေးမ ဘယ်လောက် မချိမဆန့် ခံလိုက်ရမလဲ ..
ကိုယ့်နှမလေးလို ခံစားကြည့် … ဘယ်လောက် ရင်နင့်ရမလဲ ..။
ဒီလိုအဖြစ်မျိုး နောက်မဖြစ်အောင် ဘယ်သူ တာဝန်ယူသလဲ
မလေးရှားမှာ သွားအလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာတွေ တခြားနိုင်ငံသားတွေအပေါ် ဒီလို ကျူးလွန်ရင် ခုလိုပဲ မလေးရှားက ကုလားတွေက မြန်မာတွေကို ခွင့်လွှတ်မှာပဲလား ..။
ဘာသာတွေ လူမျိုးတွေ ဆွဲမထည့်နဲ့ ဆိုပေမယ့် နောက်ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ဘယ်သူမှ ထပ်မခံစားရအောင် တားဆီးရမယ့် ဝတ္တရားအားလုံးမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက် ..
ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ စဉ်းစား ….။
နောက်တစ်ခု သေချာကြည့် … ရွာထဲမှာ အနီလိုက်ပေးတဲ့သူရှိတယ် ဆိုပေမယ့် … အခုပိုစ့်လောက် အနီ ခွန်နှစ်ခု ရှစ်ခု ဘယ်ပိုစ့်မှ မရဘူးသေးဘူး …
သေချာစဉ်းစား ကြည့်ရင် သိလိမ့်မယ် …
ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာ ဆိုတာ စောင့်ရှောက်ထိမ်းသိမ်းဖို့ …
သဘောလွှတ်ကောင်းနေဖို့ သည်းညည်းခံဖို့ မဟုတ်ဘူး…။
လက်သည်းဆိတ်ရင် လက်ထိပ်ဆိုတာ နာတတ်ရတယ် ..။
ကိုယ့်နှမ အစော်ကားခံရကာမှ .. ကိုယ့်လည်ပင်းပေါ် ဒါးရောက်ကာမှ အဘား အဘား အော်မနေနဲ့ … အပိုပဲ …
Rohinjar may become very big problem because their population is spread seven times within 30 years.
Now they are about one million.
အလွန်ကောင်းမွန်ထိရောက်သော မှော်ဆရာ၏ ကော်မန့်ပါတကား။
အနီပေးတာများနေတာထောက်ရင် ရွာထဲဘယ်လိုကောင်တွေဝင်နေလဲဆိုတာ သိသာနေပြီ။
ငါ့ကိုကြိုက်သလောက်အနီပေးငါ ထမင်းမငတ်ဘူး အဟေးဟေး ပျော်စရာကြီး။။။
ရက်ရက်စက်စက် လူမဆန်စွာပြုမူဆက်ဆံခံရပြီးမှ အသက်ပါရန်ရှာခံလိုက်ရလို့သေဆုံးသွားတဲ့ မိန်းကလေးအပေါ် အားလုံးကဂရုဏာသက်ပြီးပြောတာကို အနီတွေလိုက်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးလဲ၊ ပေးခဲ့တဲ့အနီရောင်လိုပဲ သတ္တိရှိရှိ နာမည်လေးပါ ထုတ်ပြောခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲ။
အနီတွေလိုက်ပေးထားလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ပြစ်မှူးကျူးလွန်သူဘက်က ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ စိတ် ၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို အပြစ်ပေးမှာ မလိုလားတဲ့စိတ်တွေ တွေကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။
မနောကံနဲ ့အဲဒီပြစ်မှုထဲကို ကျူးလွန်သူအဖြစ် ပါဝင်သွားပြီလို ့ပဲမှတ်ယူလိုက်တယ်။
ဟို ၃ ယောက် အပြစ်လျော့သွားအောင် နဲနဲခွဲယူလိုက်ပေါ့။
သူများနိုင်ငံလဲ လာနေသေးရဲ ့။
ပြောလိုက်ရင်သူတို ့က ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်နေလာခဲ့လို့သူတို ့လဲ ဒီနိုင်ငံသားတွေပါပဲတဲ့။
ရရင် ရသလို ၊ လစ်ရင် လစ်သလို စော်ကားမော်ကားလုပ်ပြီး ထကြွပုန်ကုန်ပြီး ဒီနိုင်ငံကို ကြီးစိုးချင်နေကြတဲ့ သူတို ့ရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကတော့ ဖုံးဖိမရဘူး။
အကုန်သူကို တယောက်မှမကျန်အောင် မောင်းထုတ်ပစ်နိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်။
ဟေဟေ့ ငါပြန်ဝင်ဖတ်ကြည့်တာ နီနီကိုရဲနေတာဘဲ
အပေါင်းလဲ ထပ်မပေးနှိုင်အောင်ကို ဝိုင်းတိုက်ကြပါကော။
မင်းတို့ထက်သွေးရဲသကွ ကြိုက်သလောက် အနီပေးပါ။
မင်းတို့ ရိုဟင်ဂျာတွေမုန်းတယ်။ကုလားတွေကို မုန်းတယ်ကွာ။
ဖြစ်နှိင်ရင် မင်းတို့ သတ္တိရှိရှိလုပ်စမ်းကွာ။မင်းတို့ယုတ်မာတာတွေကို မုန်းတယ်ကွာ။
မင်းတို့စော်ကားချင်တိုင်း စော်ကားရအောင် ရခိုင်ဆိုတာ ငါ့တိုင်းရင်းသားကွ။
ထပ်ပြောမယ် ခွေးထက်အောက်တန်းကျသော၊ ခွေးလောက်တောင်အဆင့်မရှိတဲ့
မင်းတို့ကောင်တွေကို မုန်းတယ်ကွာ။ငါ့မေး(လ်)လဲမင်းတို့ကို ဆဲတော့ ဟတ်တယ်။